Kismaayo News » U.N iyo Soomaaliya oo kala sixiixday Heshiis Caali ah(+Sawiro)
U.N iyo Soomaaliya oo kala sixiixday Heshiis Caali ah(+Sawiro)
Kn:Kulan dhexmaray qaarkamid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyo xubno ka socday Qaramada Midoobay ayaa maanta caasimadda Muqdisho ku kala sixiixday heshiis caalami ah.
Dhinaca Soomaaliya waxaa heshiiska qalinka ugu duugay wasiirka warfaafinta, Boostada iyo Isgaarsiinta iyo dalxiiska, Eng. Cabdullahi Cilmooge Xirsi, halka dhinaca Qaramada midoobayna uu galinka oogu duugay Augistina Mahiga.
Heshiiska ayaa nuxurkiisu ahaa;
In maanta wixii ka danbeeya ay dawladda Soomaaliya masuuliyaddeeda la soo wareegtay isticmaalka hawadeeda taasi oo shirkadaha isgaarsiinta ay awal hore siday doonaan ugu xadgudbi jireen, ayadoo waliba ay jirijireen shirkado shisheeye oo wadamo kale saldhigyo ku leh oo macaash faro badan ka samayn jiray.
Qodob kale ayaa ahaa in Soomaaliya laga saacida dhinaca adeegga warfaafinta. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta, mudane Cilmooge ayaa safarkiisii ugu danbeeyay ku guulaystay in lacag malaayiin doolar ah oo dayn ahaan loogu lahaa Boostada iyo Isgaarsiinta Soomaaliya xiligii dawladdii dhexe laga cafiyo isla markaana dib loo suro calinkii wasaaradda xarunta Boostada caalamka ee Geneva.
Sida uu xaqiijiyay wasiirka, xaruntii Boostada ayaa hawlgali doonta bilaha ugu horeeya ee sanadkan ina soo aadan, taasi oo suuro galin doonta in dad badan oo qurbaha jooga ay eheladooda u diraan alaabooyin muhiim ah oo dalka gudihiisa laga helin.
Bari ayaa sidoo kale la filayaa in kulan caalimi ah oo ku saabsan xuquuqul insaanka uu ka dhaco Muqdisho, waxaana lagayaabaa inay dawladda uga qayb galaan wasiirada qaar.
Hantida badan ee laga cafiyay Soomaaliya, maamulista hawadeena oo dib ugu soo noqota gacanta Soomaalida, warbaahinta dalka oo tayadeeda kor loo qaado iyo hirgalinta adeegyada boostada iyo isgaarsiinta ayaa ah guulo wax ku ool ah oo shacabka Soomaaliyeed ku faani karo, waxaana la sugayaa in guulo lamid ah ay ka soo hoydaan mustaqbalka dhaw, wasaaradda Gaashaandhigga, wasaaradda Horumarinta Arimaha Bulshada, Wasaaradda kheyraadka Dabiciga iyo Wasaaradda Arimaha Dibadda.
Puntland iyo Koonfur Galbeed oo barbar-dhac noqday
Haweenka Kismaayo oo shir nabadeed loo qabtay
Qarixii Muqdisho, tirada dhimashada oo korortay